Site na Nchọgharị, Ebe nke Abụọ Bụ Onye Na-eburu Mbụ | Martech Zone
Satọdee, Nọvemba 7, 2009 Satọdee, Nọvemba 7, 2009 Douglas Karr
Fọdụ ndị folks na-enwe ezigbo obi ụtọ mgbe ha malitere ịhụ peeji ha na-amalite igosi na nsonaazụ njin ọchụchọ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị amata otu egwuregwu ahụ dịruru ukwuu na ego ole dị n'ihe ize ndụ ma a bịa n'isiokwu isiokwu na uru uru ntinye igwe.
So… nke a bụ ihe atụ ebe m nwere ike ịkọwapụta uru nke ọkwá. Ka anyị were ya na anyị bụ San Jose Real Estate Agent na anyị nwere nnukwu blọọgụ na mgbasa ozi injinia ihe na-eme ka anyị gbagoo maka okwu a. Joselọ San Jose maka Ọrịre.
N’ọnwa gara aga, enwere nyocha 135,000 maka Joselọ San Jose maka Ọrịre.
Ọnụ ego ụlọ etiti maka ụlọ maka ire ere bụ $ 544,000 na San Jose.
Commlọ ọrụ ala na ụlọ dị n'etiti 3% na 6%, yabụ ka anyị were ọnụego ọrụ 4% median.
Ka anyị chee na ọ bụ naanị 0.1% nke ndị nyocha rụpụtara ezigbo ire ere.
SEO nchọpụta nyere ụfọdụ ọnụ ọgụgụ na ọkwa na nzaghachi, ya mere, ka anyị mee mgbakọ na mwepụ ma gbakọọ isslọrụ site na ọnọdụ nke 8 na ibe ahụ, gaa na ọnọdụ # 1 na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ ahụ:
Ugbu a, Trulia na - ejide ọnọdụ # 1 na Zillow na - ejide ọnọdụ # 2 - ọ bụghị ndị na - ere ụlọ. Agbanyeghị, eziokwu ahụ bụ na ijide ọnọdụ # 1 Trulia jidere 56% nke clicks maka nyocha ndị ahụ - ihe dị ka $ 41 ijeri na ala na-achọ maka otu obodo. Zillow dị n'okpuru $ 10. Site na oge ị ruru akwụkwọ akụkọ, ndị Mercury News, ị nọ n'okpuru $ 3 ijeri.
Achọrọ m ịmata ihe mere ndị ọrụ na ndị na-ere ahịa na mpaghara ahụ ji ahapụ akwụkwọ ndekọ aha ndị a merie… ha nwere ike na-asọ mpi kama ịdabere na ha. Ọ bụ na ọ gaghị aba uru maka otu n'ime ụlọ ọrụ mpaghara iji mefuo nde dollar na azụmaahịa ngwa ahịa ọchụchọ? Ee… ee, ọ ga.
Trulia na-emeri ugboro 4 okporo ụzọ na otu isiokwu a! 4 ugboro! Mgbe ị na-enyocha ụlọ ọrụ injinịa nchọta na ndị ndụmọdụ, agabigala eziokwu a. Buru n'uche na ọ na-amalite ịdị oke ọnụ ịsọ mpi n'ọsọ asọmpi ndị a na ọchụchọ dị elu, agbanyeghị. Anyị na onye ahịa na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ ugbu a na - akpali ha peeji nsonaazụ njin ọchụchọ ahụ. Anyị kwesịrị inweta akara 1 maka ha maka mkpọsa a iji kwụọ ụgwọ zuru oke ma nye anyị ọrụ ọzọ. The stakes bụ nnukwu na anyị ga-e - ma ọ na-ewe ọtụtụ mgbalị.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enwe obi ụtọ mgbe ha dị na peeji mbụ mistake nnukwu ndudue. O zughi ezu igosipụta mkpụrụokwu doro anya na nsonaazụ ọchụchọ engine - imeri ọchụchọ ndị ahụ bụ isi ihe iji merie azụmaahịa na dollar na-akpata ọchụchọ ndị ahụ. Bido gbakọọ nloghachi na ntinye ego maka isiokwu gị, oke nso, na ego ha nwetara. Nwere ike ịchọpụta na ọ bara uru itinye ọtụtụ narị puku dollar maka usoro ịzụ ahịa ọchụchọ. Ọ bụrụ n'ịghọtaghị ya - ikekwe asọmpi gị ga-.
Dị ka papa m na-agwa m… “Nke abụọ bụ naanị onye mbụ emeriri! ”
Tags: Brian Goffmanọ dị mmakedu ka esi atụ kloutike paswọọdụsocialbrokelekọta mmadụ
Nov 8, 2009 na 9:24 PM
E kwuru nke ọma - ebumnuche kachasị nke weebụsaịtị ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ injinia ọchụchọ bụ iji nweta # 1. Nke ahụ bụ ebe nnukwu ego dị…
Nov 9, 2009 na 5:48 PM
Ihe dị iche n'etiti # 1 na # 2 buru ibu karịa ka m chere na ọ ga-abụ.
M na-eche ma ọ bụrụ na nke a ga-anọ na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ndị ahịa ga-amalite malite ịgba ala a bit n'ihu ozugbo ahịa matures a bit…